समृद्धिको सपना अनि फितलो प्रशासनिक सेवा ? - SmartPalika - Digital Nepal eGovernance System | Smart Mobile Apps for Local Governments of Nepal
सरकारी कार्यालय प्रति हामी किन यति धेरै नकारात्मक छौ ? कुनै पनि सरकारी काम हामीलाई किन सकस पूर्ण लाग्छ ? सबैले दिने उत्तर करिब उस्तै हुन्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया , ढिला सुस्ती , अत्यन्तै गुणस्तरहिन सेवा प्रवाह । यिनै कारणहरुले गर्दा हरेक सेवाग्राही सरकारी कार्यालय गएर नराम्रो अनुभूति बोकेर फर्किन्छन् ।
प्रशासनिक क्षेत्र देशको ऐन कानुन कार्यन्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको क्षेत्र हो । देशमा कति सुशासन छ भन्ने कुराको निर्धारण त्यस देशको प्रशासनिक सेवाको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ। तर विडम्बना हामी नेपाली गुणस्तरीय प्रशासनिक सेवा बाट सधै वन्चित छौ । देशमा विकास र सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरु केन्द्रिकृत भए भनेर मुलुक संघियताको बाटो तर्फ लाग्यो । गाउँ गाउँमा सिंह दरवार भन्ने नारा सफल भयो । तर गाउँमा पुगेको सिंह दरबारमा केन्द्रको प्रशासनिक विकृतिपनि संगै पुग्यो । केवल स्थान, भवन, र कर्मचारी फरक हुन अन्यथा नेपालका सबै प्रशासनहरु ढिलासुस्ती, नीतिगत कमजोरी, भ्रष्टाचार र कमजोर व्यवस्थापनबाट ग्रसित छन् ।
सबै जसो सार्वजनिक कामका लागि हामीले औसत भन्दा बढी समय छुट्टाउने गरेका छौ । किनकि हामीलाई राम्रो सँग थाहा छ, सरकारी काममा अत्यन्त ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृति हावी भएको छ । कर्मचारी समयमा भेट नहुने, नयाँ प्राविधिक प्रणाली नभएको वा प्रयोग गर्ने जनशक्तिको अभाव हुनाले सामान्य काममा पनि धेरै समय खर्च हुने र अनावश्यक लामो प्रक्रिया भएका कारणले सरकारी काम ढिलो हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार र विचौलिया :
अधिकांश नागरिक प्रशासनिक कार्यालयहरुमा हुने भ्रष्टाचार र विचौलियासँग परिचित छन् र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संग्लन पनि छन । धेरै जसो प्रशासन कार्यलयमा घुस दिएपछि काम सहज हुने गरेको छ । अझै राम्रो रकम दिएपछि नबन्ने काम पनि बन्छ । प्रशासनिक काम कारवाही पारदर्शी र जवाफदेही नभएको कारणले यस्ता कार्यालयहरु भ्रष्टाचारको अड्डा बनेको छ । कमजोर संयन्त्रको कारण नीतिगत भ्रष्टाचार झनै विकराल छ । हाम्रो सेवा लिने प्रक्रिया झंझिटिलो छ तर त्यसको लागि आवश्यक सहजकर्ता भने छैनन् र यसको फाइदा विचौलियाहरुले उठाईरहेका छन् । विचौलियाहरुको माग अनुसारको रकम तिरियो भने तपाईको काम सहज तरिकाले सम्पन्न हुन्छ । ति विचौलिया र कार्यालयको कर्मचारीको मिलेमतोमा यस्ता कमिसनको खेल हुने गरेको छ ।
व्यवस्थापकिय कमजोरी :
नेतृत्वमा व्यवस्थापकिय सीपको अभावले प्रशासनिक सेवाहरु कमजोर व्यस्थापनको उदाहरण बन्ने गरेको छ । गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा व्यस्थापनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । राजनीतिक प्रभाव , खराब प्रशासनिक संस्कार, एवम् खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले गर्दा हाम्रा प्रशासनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन अत्यन्तै फितलो हुने गरको छ । उचित श्रोत र साधन उपलब्ध हुँदा पनि व्यवस्थापकिय कमजोरीको कारण सेवाको गुणस्तर खस्किएको उदाहरणहरु हाम्रो सामु छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनका कतिपय समस्याहरु नयाँ प्रविधि मार्फत सहज समाधान गर्न सकिन्छ। हामीले नयाँ प्रविधिलाई अझै आत्मासत गर्न सकेका छैनौँ । कतिपय सार्वजनिक कार्यालयहरुमा कम्प्युटर सम्म पनि छैन , सबै अभिलेखहरु हस्तलिखित छन । जसमा धेरै जनशक्ति र धेरै समय खर्च हुन्छ। प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा अपारर्शिता कायम नै रहेको छ ।
देशको प्रशासनिक क्षेत्र यति धेरै विकृत पूर्ण छ, हरेक सार्वजनिक कार्यालयबाट फर्केको एउटा सामान्य नागरिक देशको सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रति नै नकारात्मक बन्छ। प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारका निम्ति विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगहरु गठन भए । तिनीहरुले प्रतिवेदन पनि बुझाए तर त्यसको कार्यन्वयन भने कहिले भएन । देशको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार नगरी हामीले अन्य सफलता हासिल गर्न निकै कठिन छ ।
कसरी बनाउने नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रलाई देश र जनता प्रति उत्तरदायी ?
कसरी समाधान गर्न सकिन्छ प्रशासनिक क्षेत्रका यी सबै समस्याहरु ?
यो प्रश्नको उत्तर अब हरेक जिम्मेवार नागरिकले खोज्नु पर्छ ।